ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ (လူထုတိုက်ပွဲ) တွေ ဘာကြောင့် လိုအပ်နေသေးတာလဲ
လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ (လူထုတိုက်ပွဲ) တွေ ဘာကြောင့် လိုအပ်နေသေးတာလဲ
ကျနော့်အနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းကြောင်းကို ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြူးဖြူး လျှောက်လှမ်းချင်တယ်ဆိုရင် လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေ (လူထုတိုက်ပွဲတွေ) နဲ့ ပွင့်အောင် ဖွင့်ယူရဦးမယ့် ပြဿနာတွေ များစွာရှိသေးကြောင်း အကြံပြု ရေးသားခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် အကြံပြုခဲ့တဲ့ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတွေထဲမှာ အမေရိကန်လေယာဉ်ကြီးတွေ မြန်မာ့ကောင်းကင်ယံမှာ ၀ဲပျံပြီး ချက်ချင်း ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အကြံပြုချက်မျိုး တခါမှ အကြံမပြုခဲ့ဖူးပါ။ လူထုတိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတွေကို အကြံပြုရာမှာတောင် ဦးသိန်းစိန် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ တက်မလာမီက အကြံပြုပုံနဲ့ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အကြံပြုပုံတွေ ကွာပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်မလာမီ ကာလတုန်းကတော့ လူထုတိုက်ပွဲ လိုအပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားတဲ့အခါ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ အလုံးစုံ ပြုတ်ကျရေးအပေါ် ဦးတည်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေ အဓိကပါဝင်ပြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ မဖြစ်မနေ ဖွင့်ပေးလာရတဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မစို့မပို့ အနေအထားကို အားသာချက်အဖြစ် ရယူပြီး မပွင့်သေးတဲ့ အခြားအပေါက်တွေကို လိုအပ်ရင် လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေနဲ့ တပေါက်ချင်း ဆက်တွန်းဖွင့်သွားဖို့ အကြံပြုရေးသားချက်တွေ အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။
“မပွင့်တပွင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်နဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အားသာချက်တွေကို အမိအရယူပြီး အိုင်တီနည်းပညာ အားသာချက် အကူအညီနဲ့ လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေုးစီတန်းလမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကတော့ စိုက်ထူခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကျောက်တိုင် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကို ကြည့်ရင် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူထူရဲ့ဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာကို လက်ရှိကြံ့ဖွံ့အစိုးရရော ကမ္ဘာကပါ သိအောင် ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အမြတ်ရတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။”
ပြောရရင် လက်ရှိ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ပိတ်ဆို့နေလို့ ဖြေရှင်းရမယ့် ကဏ္ဍအလိုက် ပြဿနာတွေကို မျက်စိထဲမြင်အောင် မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပျားအုံကြီးထဲက အကွက်တွေလို အကွက်တခုနဲ့ တခု (ပြဿနာတခုနဲ့ တခု) ဆက်စပ်နေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပျားအုံကြီးရဲ့ အကွက်တွေထဲက အကွက်တကွက်ဟာ ကဏ္ဍတခုဆိုရင် အဲဒီအကွက်တွေထဲ နကျယ်ကောင်တွေ အိမ်ဝင်ဆောက်ထားသလို ကဏ္ဍတိုင်းမှာ ပြဿနာတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့နေခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့အချိန်မှာက ပျားအုံကြီးရဲ့ အကွက်အနည်းအကျဉ်းသာ ပွင့်သေးတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ပြောရရင် လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင်နဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြခွင့် (မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်) အကွက်နှစ်ကွက်တောင် အလုံးစုံ ပွင့်ပြီလို့ ပြောမရသေးတဲ့ အနေအထားပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ မပွင့်တပွင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်နဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အားသာချက်တွေကို အမိအရယူပြီး အိုင်တီနည်းပညာ အားသာချက် အကူအညီနဲ့ လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးနဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေုးစီတန်းလမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကတော့ စိုက်ထူခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကျောက်တိုင် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကို ကြည့်ရင် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောလို့ရပေမယ့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် လူထူရဲ့ဆန္ဒ ဘယ်လိုရှိတယ် ဆိုတာကို လက်ရှိကြံ့ဖွံ့အစိုးရရော ကမ္ဘာကပါ သိအောင် ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အမြတ်ရတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ အခုနောက်ဆုံး လက်ပံတောင်းတောင် အထွေထွေသပိတ် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေကတော့ နေရာအနှံ့မှာ လုပ်ဆောင်နေကြဆဲမို့ ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ဖို့ စောပါသေးတယ်။
သေချာတာကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေဆဲ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရလက်ထက်မှာ အနည်းအကျဉ်း ပွင့်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ပြဿနာပျားအုံကွက်တွေ အများစုဟာ ပိတ်ဆို့နေဆဲပါ။ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အကွက်တွေအားလုံး အကုန်အစင် ပွင့်သွားမှသာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို အားကောင်းမောင်းသန် လျှောက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ပိတ်ဆို့နေဆဲ ပြဿနာပျားအုံကွက်တွေ အကုန်အစင် ပွင့်သွားစေရေး ကြိုးပမ်းရာမှာ လွှတ်တော်ထဲက တွန်းဖွင့်လို့ရတဲ့ ပြဿနာပျားအုံကွက်အချို့ ရှိနိုင်သလို လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုပွဲ (လူထုတိုက်ပွဲ) ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တွန်းဖွင့်မှရမယ့် ပြဿနာပျားအုံကွက်အကြီးစားတွေ (ဥပမာ - အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး၊ လက်မဲကြီးတွေ ထွက်လာပြီး လူထုကို အကြမ်းဖက်တတ်တဲ့ ကာလုံအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရေး၊ စီးပွားရေးမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတဲ့ စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ ဖျက်သိမ်းရေးတွေ) လည်း ကျန်ရှိနေတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတလော ဒီမိုခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ခေတ်စားလာနေတဲ့ “ရနေတဲ့ ပွင့်လင်းမှုအခြေအနေမှာ ရှိသမျှ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ဥာဏ်ကြီးကြီးထားကာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာရမယ်” ဆိုတဲ့ ၀ါးတားတား လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း အကောင်အထည်ပေါ်အောင် ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိပြီဆိုရင် ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၁၀ လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကြီးလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြီးရဲ့ တရားခံဟာ ပေါ်တာ ကြာလောက်ပါပြီ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီ ဖွဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါလျက် အခုအထိ လက်သည်တရားခံ ပေါ်အောင် မဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကို ကြည့်ရင် လက်ရှိ ရနေသမျှ လွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်လောက်နဲ့ ဥာဏ်ကြီးကြီး စစ်ဆေးအဖြေရှာ ဖော်ထုတ်လို့ မရသေးတဲ့၊ ဖော်ထုတ်လို့ မရဲသေးတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖုံးလွှမ်းပိတ်ဆို့နေသေးလို့ ဆိုတာကို တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အခုအချိန်မှာ လက်ပံတောင်းတောင်သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲခံရတဲ့ကိစ္စ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့တာလည်း ဖွဲ့တာပဲရှိမယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြီး လက်သည်တရားခံစစ်စစ်ကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး၊ အခြေအနေ မရှိသေးတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပါလည်း ပါတာပဲရှိမယ်။ သူတို့အာဏာနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိပါးမယ့်အရေးဆိုရင် လက်မဲကြီးတွေ ထွက်လာပြီး လူထုကို အကြမ်းဖက်တတ်တဲ့ ကာလုံအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းရေးကို မလုပ်ဆောင်နိုင်မချင်း စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူတဲ့ အလုပ်တွေဟာ အဆင့်တခုမှာ ရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်းပြီး ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နည်းတူ အီးယောင်ဝါး ဖြစ်သွားဖို့ပဲ များနေပါတယ်။ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးတွေ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကိုသာ လွှတ်တော်ထဲမှာသော်လည်းကောင်း၊ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တွေအနေနဲ့သော်လည်းကောင်း ဖြေရှင်းကောင်း ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်တဲ့၊ အမည်ခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တွေ တတ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့၊ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက် မတရား လက်ဝါးကြီးအုပ် ဖိနှိပ်ရက်စက်ထားတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှေ့လျှောက်မှာလည်း အများကြီး ပေါ်ထွက် ထကြွလာစရာရှိသေးတာမို့ ၂၀၁၅ ကို မရောက်မီ လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ (လူထုတိုက်ပွဲ) တွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ပေါ်ထွက်လာနေဦးမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လူထုတိုက်ပွဲ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပိတ်ဆို့နေဆဲ လက်ကျန် အပေါက်အားလုံး ပွင့်ထွက်သွားအောင် ညီညီညွတ်ညွတ် ဆက်ပြီး တွန်းဖွင့်သွားနိုင်မှ ရှေ့ခရီးမှာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အဟန့်အတားမရှိ အားကောင်းမောင်းသန် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
he speak very well.
The way of Dr. Lun Swe's thinking is totally match with president Thein Sein. Because Mr.president don't wants to know what kind of happeninh in front of his eyes. Even though people voice of desire, needs, requirements.., are spreading in the universe. He act asablind and deaf.
He speaks many times about the implimentation, all inclusive national reconciliation , but nothing to negotatiate with Lappadaung people and monks that they have any weapons. President neglect ordinary people desire except his close friend Chinese and Indian.
So, all inclusive of civil society and teems must be unite and shout loudly to hear the blind and deaf President and his members.
They never do as they say. Now, they say national reconciliation, but they never do as they say. We saw clearly their monarchist cruel practice when they burn public and monks cruelly without systematic negotiation.
So I say that Dr. Lun Swe idea are totally match with U Thein Sein and his colleague behaviors..
ကျုပ်ကမြစ်ကြီးနားကပါ။ ယာမြေလုပ်နေတဲ့တောင်သူပါ။ မြစ်ဆုံတုန်းက ကျုပ်လဲဝင်ပြီးဆနဒတွေ ပြခဲ့သေးတယ်။ မကြာပါဘူး၊ ဒို့သမတ ကြီးက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးကို ရပ်ပေးခဲ့တယ်။ အခုကျတော့ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးထက် အဆပေါင်းများစွာငယ်တဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်းကျတော့မှ ဘာဖြစ်လို့ ရပ်မပေးတာရလဲ။ ကျုပ်စဉ်းစားလို့ကိုမရဘူး။ နောက်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းတာကို အမေရိကန်အပါဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေက ဘာလို့ဘာမှမကန့်ကွက်ပဲ ရေငုံနုတ်ပိတ်နေကြတာလဲ။ အရင်ကဆို အစိုးရကနဲနဲကလေး လုပ်တာနဲ့ သူတို့ကအရင် စီကနဲ ကန့်ကွက်နေခဲ့တာ။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကိုပြုပြင်ရေးးဆွဲဖို့တာ လွှတ်တော်ထဲမှာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒ်ါစုလဲမတတ်နိုင်ဘူး သေချာတယ်။ လူထုတိုက်ပွဲနဲ့မှသာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ကိုပြုပြင်ရေးးဆွဲ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ဗိုလ်တမတ်သားမြင်တွေ့ရတာ အရုပ်ဆိုးအကြည်းတန် မျက်စိစပါးမွှေးစူးလိုက်တာ။
ခင်ဗျားတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အသိ ရှိပါတယ်။ တာဝန်အရ အလုပ် လုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ဟာ စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး။ အချိန်တန်ရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေက စကားပြောလာလိမ့်မယ်။
Dr Lwun Swe- We need to harmonize all political activities and struggles inside and outside of parliament to achieve our common goal to build Democracy system in our Country. Please bear in mind that if we critize insincerely on democracy forces who are fighting inside Paliament means we are similar to stupid man who cut his own hands and legs.